China Eco-friendly Cosmetic Bag Organizer Zipper Pouch miaraka amin'ny orinasa Tassel Puller sy mpamatsy | Changlin
Toerana niandohana: GUA, CN Port: Shenzhen, GZ, HK
Mahatsara azy: voajanahary, azo havaozina
Ny endrika dia tsy lehibe loatra, ka mora entina sy tehirizina. Ankoatr'izay, mahafatifaty izy ary manokana ampiasaina amin'ny unisex.
Ny kitapo iray manontolo dia voajanahary ary mahafeno ny fepetra "sariaka amin'ny tontolo iainana". Ity kitapo ity dia T-endrika izay maharitra.
Ny Zip miaraka amin'i Tassel
Malemy ilay tassel ary mitombo mavitrika sy manokana.
Ho an'ny fitsangatsanganana dia ampy lehibe ny manangona fonosana kosmetika na fandroana.
Previous: Kitapo mololo taratasy Eko-namana voajanahary loko manao tarehy kosmetika Organizer
Manaraka: Kitapo kitay voajanahary voajanahary Eco-friendly Cosmetic Organizer Zipper Pouch make up Bag